Askartii ay dowladu geysay Gedo oo la amray in lasoo celiyo – Soomaali 24 Media Network
Askartii ay dowladu geysay Gedo oo la amray in lasoo celiyo
Posted on August 30, 2021 Leave a Comment on Askartii ay dowladu geysay Gedo oo la amray in lasoo celiyo
Askar badan oo dowladda Soomaaliya labadii sanee la soo dhaafay ay diyaarado ku geysay gobolka Gedo ayaa la amray in dib looga soo daabulo xilli aysan wali dhinac u dhicin xiisadda gobolkaasi.
Wararkii ugu danbeeyay ee arimah gobolkaasi ayaa sheegaya in Korneel Cabdullahi Daahir, Cabdullahi Dheere oo ah taliyaha dabagalka NISA, kuna heyb ah madaxweynaha Jubbaland uu xaaladaasi soo fara geliyay.
Iyadoo ay maalmo kahor ahayd markii gudoomiyaha dowladda ugu magacaaban Gedo Axmed Buulle Gareed uu jeediyay hadal xasaasi ahaa, shaki badanna dhaliyay oo uu ku sheegay in aysan gobolkaasi tagi karin mas’uuliyiin ka socta Jubbaland, ayuu Korneel Cabdalla amray in si deg deh ah arimahaasi wax looga qabto.
Wuxuu Cabdullahi Daahir oo waayahan ka ag dhaw Ra’iisla wasaare Rooble uu faray in maalmaha soo aadan si deg deg ah Muqdisho loogu soo celiyo askartii horay ay dowladda gobolkaasi u geysay.
Amarkaan ku aadan soo daad gureynya inta ka harsan boqolaalkii askar ee Gedo la geyay ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa cabsida ah in halkaasi ku dagaalamaan ciidamo kala amar qaata oo siyaasadda iska horjeeda ah.
Sidoo kale xogaha hoose ayaa sheegaya in Korneel Cabdullahi Dheer uu si cad shir arimaha amniga ah uga sheegay in loo baahan yahay soo celinta askartii loo qaaday Eritrea si aan loogu adeegsan dano kale oo gaar ah.
Ilaha wararkan laga soo xigtay oo ah saraakiil amaanka ayaa intaasi waxay ku dareen in Taliyaha dabagalka uu wado qorshe uu toos ugu hirgalinayo heshiis horay u dhex maray midowga musharaxiinta iyo Ra’iisal wasaare Rooble kaasi oo ah in dhamaan qeybaha ciidamada laga joojiyo u adeegsiga siyaasadda, islamarkaana uu hadda amar ku bixiyay in askar kasta ee magaalo kale loo geeyay arimaha la isku hayo dib loo soo wada celiyo.
Arintaani waxaa lagu tilmaamay mid muujineysa kala jab hey’adaha amniga dhexdooda ah oo ku aadan hanaanka loo wajahayo amniga doorashada.
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe iyo Taliyaha dabagalka ayay dadka qaar sheegaan inuu xiriir ka dhaxeeyo iyadoona loo sababeeyo kala fogaanshaha sarkaalkan iyo Villa-Somalia,
Gobolka Gedo waxaa ku wada sugan maamulka ay dowladda ka dhistay, ciidmadii la geeyay, iyo sidoo kale gudoomiyihii hore ee gobolkaasi Macalimow oo dowladda hadda ka soo horjeeda iyo askar ka amar qaadata.
← Xog: Sirdoon ka socda dowladda Masar oo Muqdisho yimid iyo howlgal qarsoon
Xog- Sababta ay Shabaab isaga fogeeyeen dilka Ikraan Tahliil →